Apple waxay bixisaa amaan si loo xuso noloshii Muxamed Cali | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay bixisaa amaan si loo xuso nolosha Muxamed Cali
In lagu sharfo nolosha feeryahankii halyeeyga ahaa Muhammad Ali, Apple ayaa leh cusbooneysiiyay boggaaga guriga isaga oo leh sawir iyo a balanta in uu yiri waagii hore. Feedhyahankii halyeeyga ahaa wuxuu geeriyooday Sabtidii lasoo dhaafay at 74 sano isbitaalka Phoenix, Arizona, oo ah halka Cali la dhigey isbitaalka horaantii usbuuca sababo la xiriira dhibaatooyin xagga neefsashada ah. Wuxuu sidoo kale la xanuunsaday cudurka Parkinson, cillad ku timaadda habdhiska neerfaha oo saamayn ku yeeshay dhaq-dhaqaaqa muddo dheer, taasina waxay ka sii dartay. Runtu si fiican umay soo bandhigin halyeeygan.
"Qofka aan ku dhiiran karin inuu qatar galiyo waxba nolosha kama qaban doono." Nabad ku naso #Muhammad Ali
- Tim Cook (@tim_cook) 4 Juunyo 2016
Sawirka Cali waxaa weheliya mid kamid ah taariikhdiisii ​​halyeey. "Ninka male male male baalal".
Maamulaha Apple Tim Cook y Phil Schiller, ayaa sidoo kale ku soo qoray tweet-ka xusuusta ku saabsan Cali. Feedhyahankii weynaa wuxuu ka soo muuqday Apple gudaha "Apple Ka Fikiraya Xayeysiin Kala Duwan" en 1.997. Sida aad ku aragto fiidiyowga waxaan kaaga tagi doonaa dhamaadka maqaalka. Halyeeygii Muxamed Cali, seddex jeer oo adduunka ah miisaanka culus ayaa ku qoran xitaa kor Mike Tyson ka mid ah kuwa ugu waaweyn feedhka. Laakiin cudurka Parkinson iyo dhibaatooyinkiisa ayaa u qaaday qabriga iyadoo aan loo digin. Iyadoo Ali la waayo in ka badan xubin ka mid ah pantheon-ka isboortiga Mareykanka, ayaa saddex jeer oo ah horyaal miisaanka culus ee adduunka y Dahabka Olombikada da'da 18.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay bixisaa amaan si loo xuso nolosha Muxamed Cali
Tony Fadell, abuuraha iPod, wuxuu ka tagayaa Nest (Google)
Apple waxay horey safaarad cusub ugu yeelatay India